Fizahàn-tany - Wikipedia
Ny fizahàn-tany na fizahan-tany dia sady fandehanana sy fitoerana mandritra ny fotoana voafetra any amin' ny toerana iray ivelan' ny toeram-ponenana mahazatra mba hahazoana fahafinaretana, no sehatr' asa ara-toekarena ikendrena ny hahazoan' ny olona manatanteraka izany fivahiniana izany, ka voafaoka ao amin' izany ny fikarakarana ao amin' ny trano fandraisam-bahiny sy fikarakarana ny fandehanana sy ny fitaterana azy ireo. Ny olonana manatanteraka ny fizahan-tany ho an' ny fahafinaretany no atao hoe mpizaha tany.
Tamin' ny taonjato faha-18 tany Angletera vao nisy ny fizahan-tany na dia efa nisy ny fandehanan-davitra hahazoana fahafinaretana. Maro isan-karazany ny endrika isehoan' ny fizahan-tany arakaraka ny tanjona kendren' ny mpizaha tany, ka isan' izany ny fizahan-tany momba ny fahasalamana, ny fankanesana eny amoron-dranomasina, ny fakanesana eny an-tendrombohitra, ny fanatanjahan-tena, ny fialam-boly, ny kolontsaina, ny tontolo iainana, sns. Misy koa ny fizahan-tany mamoafady, izay raràn' ny lalàna any amin' ny firenena maro.
Tsy ny olona rehetra no afaka mizaha tany fa ireo manan-katao, indrindra ireo olona avy amin' ny firenena manan-karena.
Betsaka ny mpiasa amin' ny haino aman-jery mandiso fanoratra sy fanonona ny hoe mpizaha tany sy mizaha tany. Tsy misy n ny aorian' ny mpizaha sy mizaha, toy ny tsy anisiana n ny hoe mpijery sy mijery ao amin' ny hoe mpijery lanonana sy mijery lanonana. Diso ny hoe *mpizahan-tany sy ny hoe -mizahan-tany, toy ny maha diso ny hoe *mpijerin-danonana sy ny hoe *mijerin-danonana. Tsy mahazatra ny maro ny mametraka ny tendro eo amin' ny vanin-teny -ha- ao amin' ny hoe fizaha- noho ny fitsipi-panoratana mahazatra tsy mamporisika ny fampiasana tendro.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fizahàn-tany&oldid=1000436"
Dernière modification le 16 Janoary 2021, à 03:22
Voaova farany tamin'ny 16 Janoary 2021 amin'ny 03:22 ity pejy ity.